UL90, PVC Stabilizers yeinodzivirirwa waya imwe chete waya yemagetsi waya yemhangura conductor network tambo
Aimsea yanga ichivandudza, kugadzira uye kushambadza yakasimba, yakakwira mashandiro eCalcium Zinc (CaZn) zvigadziri zvakagadzirirwa kuzadzisa zvese zvinodikanwa zvekukwirira-kumagumo sheathing uye kuputira kunyorera kweiyo indasitiri yetambo. CaZn inoverengeka yemutengo-unoshanda kugadzirisa zvigadziri izvo zvinowedzera zvakanyanya mashandiro eakapedzwa PVC tambo dzemakomputa, inopa yakanakisa kupisa kugadzikana uye zvemagetsi zvimiro, yekutanga vara uye kugadzikana kwemavara, inokodzera mwenje uye inorema calcium nhema, chena waya netambo, yakanakisa kudziya kwemafuta, inokodzera magetsi tambo bhachi.
UL80, PVC Stabilizers inoshanduka PVC waya Yakagadziriswa cabling coaxial fiver yakakombama waya
Yedu PVC zvigadziri zvakashandiswa zvakanyanya kuTwisted peya tambo inowanzo shandiswa parunhare kutaurirana uye mazhinji emazuva ano Ethernet network. Iyo mhando yewiring umo ma conductor maviri wedunhu rimwe akamonyaniswa pamwechete. Peya mbiri dzinoumba dunhu rinogona kuendesa data. Uye vaviri vacho vakamonyaniswa pamwechete kuti vape dziviriro kubva kune crosstalk, ruzha rwunogadzirwa nepedyo vaviri. Coaxial tambo, kana coax tambo, yakagadzirirwa kuendesa yakakwira-frequency masheni. Izvo zvakanakira ndeyeCongo tsvuku kune yakasviba waya uye tambo, inokodzera mwenje calcium fomula, inokodzera yehupfu tambo bhachi uye yakanakisa kupisa kwemafuta
UL105, PVC stabilizer yewaya pasi yekuisa telecommunication tambo
Iyo Stabilizer system ine yakakosha pesvedzero pane kuita uye hupenyu hwehupenyu hwePB tambo. Inoita inogonesa inobudirira tambo netambo, tambo dzepasi, tambo dzekumisikidza, telecommunication tambo uye inopa yakatarwa hunhu kune izvo zvakapedza zvigadzirwa-zvinosanganisira yakanaka kupisa kugadzikana uye emagetsi zvivakwa, yekutanga ruvara uye ruvara kugadzikana, yakakodzera mwenje uye inorema calcium nhema, chena waya uye tambo, yakanakisa tembiricha kugadzikana, yakakodzera simba tambo bhachi
Calcium Zinc Stabilizer ye5G tambo Telecommunication mitsara magetsi tambo tambo
PVC inowanzo shandiswa 5G yemagetsi tambo yejacket nekuda kwayo yakanakisa emagetsi ekudzivirira zvivakwa uye dielectric kugara. PVC inowanzo shandiswa mune yakaderera voltage tambo (inosvika gumi KV), telecommunication mitsara, uye magetsi wiring. Iyo yekudzikamisa sisitimu ine yakakosha kukanganisa pane kuita uye hupenyu hwehupenyu hwePV tambo. Inogona kunyatso kugadzira tambo newaya, uye ichipa chakapedzwa chigadzirwa chaicho zvivakwa-kusanganisira yakanaka yekupisa kugadzikana uye zvemagetsi zvivakwa, yekutanga vara uye ruvara kugadzikana, yakanaka michina zvivakwa, inosimudza kupararira. Ca / Zn inogadzikana inogara ichiwedzerwa kune waya & waya kuputira uye jeketi makomputa ekuwedzera kuchinjika uye kudzikisa brittleness. Izvo zvakakosha kuti iyo stabilizer inoshandiswa iine kukwirana kwakanyanya nePVC, yakaderera volatility, yakanaka kukwegura zvivakwa, uye ive electrolyte-isina. Kunze kwezvinodiwa izvi, mapurasitiki anosarudzwa nezvinodiwa zvechigadzirwa chakapedzwa mupfungwa.
PVC yokuvirisa, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC Stabilizer, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa,